မြန်မာနှစ်သစ်မှာ ကံစမ်းကြရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Community & Society » မြန်မာနှစ်သစ်မှာ ကံစမ်းကြရအောင်	6
Posted by manawphyulay on Apr 22, 2016 in Community & Society |6comments
ချစ်ခင်ရပါသော မောင်နှမများအားလုံးအတွက် မနောမှ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်အဖြစ် ကံလည်းစမ်းရင်း အပြင်းလည်းပြေဖြစ်ရအောင်။
ကိုယ်တိုင်ကံစမ်းဖူးပြီး ကိုယ်တိုင်မဲပေါက် အမှန်တကယ် ထုတ်ပေးတဲ့ ကံစမ်းမဲဝက်ဂ်ဆိုက်လေး တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နှစ်သစ်မှာ အားလုံး ကံကောင်းသူများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
Get Chance (http://get-chance.asia/my)
ကံစမ်းမဲ ဝက်ဆိုက်မှ ကြိုဆိုပါတယ်
Get Chance တွင် မည်သူမဆို အခမဲ့ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက် ကံစမ်းနိုင်ပါတယ်
Get Chance တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲရန်
အဆင့် (၁) ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တစ်ခုရယူပါ
အဆင့် (၂) GCMoney စု၍ နှစ်သက်ရာ ဆုပစ္စည်းများကို ကံစမ်းပါ
အဆင့် (၃) ဆုရသည့် အီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာအား စစ်ပါ
အဆင့် (၄) ဆုရယူလိုက်ပါ
အားလုံးကို အမြဲသတိရ ချစ်ခင်လေးစားလျှက်
ဦးဦးပါလေရာ says: (GCMoney) ဆိုတာအတွက် တခုခုလုပ်ပေးရမယ်ထင်တယ်..
manawphyulay says: ဟုတ်ကဲ့ ဦးဦးပါ
စက်ဝိုင်းလေးကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လှည့်ပေးရင်လည်း ကံစမ်းလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်ရင်လည်း ထပ်မံကံစမ်းထားလို့ရပါတယ်ရှင့်။ အပျင်းလည်းပြေ ကံလည်း စမ်းပေါ့ ဦးဦးပါရယ်… ဟုတ်ဘူးလား..
Thint Aye Yeik says: ကံစမ်းမဲတို့ လောင်းကစားတို့. . .ထီတို့ ချဲတို့. . .
ရဖို့ မသေချာတဲ့ အရာတွေနဲ့ ကျနော် အကျိုးမပေး။
သူများအတွက် လွယ်လွယ်လေး ရတဲ့ကိစ္စတောင်မှ ကျနော်က ချွေးပလောက်ပလောက်ကျအောင် လုပ်ယူမှ ရတာ။
ကိုယ်ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်မှ ကိုယ်ရ။ တိုက်ဆိုင်မှု မရှိ။ ကံကောင်းလို့ဆိုပြီး ရတာ မရှိ။
ဆိုတော့ ကံစမ်းမဲတို့ ထီတို့ လောင်းကစားတို့ကို လုပ်ကို မလုပ်ဖြစ်တော့တာာရယ်
manawphyulay says: မနောလည်း ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတဲ့သူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ကံဇာတာပါပုံရပါတယ်။
ထီဆိုလို့ မနောလည်း ထီကံ တစ်ခါ ကြုံဖူးပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်လောက်က အမေရိကန်ဒီဗွီ ပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
လစဉ်ထီတော့ မထိုးဖြစ်ပါဘူး။ ကံစမ်းမဲကတော့ ကြိုကြား ကြိုကြား ပေါက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ကံ ဘယ်တော့လောက်တက်လဲဆိုတာ ကံစမ်းကြည့်မှသိမှာပေါ့နော်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကျုပ်ကတစ်ခါမှကံမကောင်းဖူးဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: ဒီတစ်ခါလည်း ထပ်စမ်းကြည့်ပါလား လေးမိုက်ရဲ့…